I-2011kobra: le yindlela yokwenza imali kubaphulaphuli bakho ukwenza imali 💸 - 💌 I-WebTK - iTikiti lakho ukuze WebTalK 🚀 Mema, Hlola, Iindaba kunye nokunye 🔥
I-2011kobra: yindlela yokubenza ngcono abaphulaphuli bakho 💸
Disemba 9, 2019 by
I-2011kobra: Siyakuvuyela ukuba yenye yeendlela eziphambili ze-YouTube ngaphakathi Gini eNtsha yasePapuwa! 💐💐💐
Kodwa unokwenza nangcono: unokuba yenye yeendlela eziphambili kwi Webtalk 🚀 kwaye uvelise imali eninzi.
Webtalk luhlaziyo kwimidiya yoluntu ekuhlawula ukuba ubuyela kwi-50% yayo yonke ingeniso. Xa abalandeli bakho bebukele iividiyo zakho, uyafumana umvuzo. Xa ukugqithisela ukubukela ikhona ividiyo, nkqu nabo bakhuphisana nabo, uyafumana umvuzo. kunye Webtalk, Ukuthumela kwakho iba yincwadi yakho ye ishishini ebomini njengoko bekwenzela ingeniso entle yokulula. Awukakholelwa ngoku? Bona yimalini onokuyifumana ngayo Webtalk.
Khawufane ucinge ukuba i-10% yabalandeli bakho bangoku Ujoyine Webtalk kwiqela lakho kwaye ubhekise kuwe. Mangaphi amawaka eedola anokukumela inyanga nenyanga?
Kwangoko ujoyine kwaye uqalise ukwakha abaphulaphuli bakho kuyo Webtalk, mkhulu amandla akho okufumana. Isibhakabhaka ngumda 🚀🚀🚀
Ngokujoyina i Webtalk Stars iqela, unesibonelelo esongeziweyo: uya kufumana inkxaso yeklasi yokuqala ye-VIP kunye nezinye izixhobo ezininzi zokukhulisa abaphulaphuli bakho. Iqela lethu lizinikele kwimpumelelo yakho. Uninzi lwempembelelo kunye nosaziwayo sele lithembele kuthi ke uya kuba kwinkampani elungileyo.
Ngaba unayo nayiphi na imibuzo malunga Webtalk kunye neqela lethu? Zive ukhululekile ukunxibelelana nathi ku
Silindele ukukubona uqhubeke Webtalk kungekudala, Elona qela libalaseleyo lakho! 💛💚💙💜
UJacques-Louis Kreiss - Webtalk Stars iqela umsunguli
Inkcazo yesitayile sakho:
Igqityelwe ukuvuselelwa kwi Disemba 9, 2019
iindidi Youtubers kwi Webtalk tags Gini eNtsha yasePapuwa, YouTuber, Youtuber kwi Webtalk Post yokukhangela
I-Fortnite Rusher: le yindlela yokwenza imali kubaphulaphuli bakho 💸
Hunter X Hunter: nantsi indlela yokwenza imali kubaphulaphuli bakho et
UMeredith Lindsey: I-5 Million Fans ikulindile Webtalk!
UJim Lindsey: I-5 yezigidi zeFani zikulindile Webtalk!
UJames E Lindsey: I-5 Million Fans ikulindile Webtalk!
I-Hub Lindsey: I-5 yezigidi zeZigidi zikulindile Webtalk!
UDoug Lindsey: I-5 Million Fans ikulindile Webtalk!
ikhaya - Youtubers kwi Webtalk - I-2011kobra: yindlela yokubenza ngcono abaphulaphuli bakho 💸